Momba anay - Zhejiang Huaxiajie Macromolecule Building Material Co., Ltd.
Zhejiang Huaxiajie Macromolecule Building Material Co., Ltd.,izay natsangana tamin'ny taona 2004, mpanamboatra manokana ny rindrina sy ny valindrihana PVC izy, ny bobongolo vita amin'ny busa, ny mombamomba ny PVC / WPC ary ny decking ivelany PVC / WPC izay mifanaraka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny orinasanay dia miorina eo akaikin'ny toerana mahafinaritra an'i Mogan Mountain any Wukang, Deqing, Faritanin'i Zhejiang. Misy 45 kilometatra miala ny Farihy Andrefana any Hangzhou ary 160 kilometatra miala ny tanànan'ny Metropolitan-Shanghai. Ka ny fitaterana amin'ity faritra ity no tena mety indrindra.
Manana injeniera sy teknisiana mihoatra ny 30 izahay izay manampahaizana manokana amin'ny famolavolana vokatra vaovao. Ny vokatray dia afaka afa-po amin'ny fangatahan'ny mpanjifa. Ny karazan-karazany rehetra, ny lamina sy ny loko novolavolainay dia mitarika ny lamaody amin'ny sehatry ny haingo sinoa. Manana magazay miisa 140 mahery izahay ary manana patanty marobe any Sina. Ny vokatray dia hita manerana an'izao tontolo izao toa an'i Eoropa, Moyen Orient, Azia ary Amerika.
Raha liana amin'ny iray aminay izahay, azafady mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny. Manantena ny hanana fifandraisana amin'ny mpanjifa eran'izao tontolo izao izahay!
Teraka ny ampahany voalohany amin'ny PVC Panel miaraka amin'ny marika Huazhijie, izay mameno ny tsena tontonana banga amin'ny kalitao avo any Sina.
Deqing Huazhijie haingon-trano haingon-trano co., LTD. hita.
Zhejiang Huaxiajie Macromolecule Building Material Co., Ltd. hita. Tanjona ny hanitatra sy hampiroborobo ny teknolojian'ny PVC sy WPC Foam miaraka amin'ny marika Huaxiajie.
Atrikasa No.2 no napetraka. Nahatratra 30000 metatra toradroa tanteraka ny velaran'ny atrikasa.
Nahazo ny taratasy fanamarinana ISO9001: 2000 navoakan'ny SGS.
Atrikasa No.3 no napetraka. Nahatratra 40000 metatra toradroa tanteraka ny velaran'ny atrikasa.
Nahazo ny mari-pahaizana CE.
Ny mpitarika ny Komitin'ny Antoko Deqing County sy ny Governemanta County dia mitsidika ny orinasa Huaxiajie ary nilaza fa hamporisika sy hanohana ny fampandrosoana ny Huaxiajie izahay.
Huaxiajie dia manatrika ny Forum ara-toekarena Asia-Pasifika faha-11.
Huaxiajie dia mahatratra ny marika ambony valinteny faratampony China.
Ny orinasanay dia manana ny tsipika famokarana mandroso avy any Alemana sy Italia, ny fahaiza-manao isan-taona mihoatra ny 5 tapitrisa metatra toradroa PVC rindrina sy valindrihana valindrihana, mihoatra ny 6000MT vokatra busa PVC, ary mihoatra ny 2000MT vokatra PVC hafa. Ny vokatray dia manana tombony miharihary amin'ny hery avo lenta, porofo maloto, doro afo, porofo mando, fanoherana ny fiantraikany, fanoherana ny feo, fametrahana mora, ary fikojakojana mora sns. Izy io dia azo ampiasaina mandritra ny 30 taona tsy misy fahanterana na mihalefy ary misy karazany marobe amin'ny karazana hotely rehetra, tranon'ny birao, hopitaly, sekoly, zavamaniry indostrialy, tranom-barotra, trano fisakafoanana ary trano fonenana toy ny haingon-trano anatiny.
Ahoana no hividianana
6. Nanamafy ny PI ary nanao ny fandoavam-bola ，
Ahoana ny fandoavana